Ingabe kungaba neziphepho eSpain? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma unentshisekelo ngalezi zimo zezulu, impela ufuna ukwazi ukuthi kungenzeka yini lokho kwakhiwa i-F5 uzungeze lezi zingxenye, akunjalo? Kungaba kuhle ukubona ezinye, inqobo nje uma kwakhiwa ezindaweni lapho kwakungekho muntu osengozini.
Ingabe kungaba neziphepho eSpain? Yebo kunjalo, kepha akukho okuqhathaniswa nalezo ezingabonakala e-US.
I-United States, ikakhulukazi idolobha lase-Oklahoma, yaziwa ngezehlakalo zezulu ezimbi kakhulu ezenzeka lapho, kubandakanya neziphepho. Unyaka ngamunye kwakhiwa eziningana ezishiya abazingeli bemangele. Yizinto ezinhle kakhulu, kepha futhi ezingabhubhisa, kangangokuba uma unethuba lokuya kulezo zindawo, akudingeki usondele ngaphezu kwe-2km.
ESpain izivunguvungu azidluli esigabeni seF1. Benza ukulimala kwempahla okuncane, kepha akukho okubi. Kodwa-ke, ukuthi kungenzeka ukuthi kube namandla amakhulu njengalawo aseNyakatho Melika kuncane kakhulu, kodwa kuyiqiniso, ngokusho kukaJerónimo Lorente, uprofesa wezemeteorology e-University of Barcelona.
Isithombe - U-Ericksson
Emasimini ethu, noma kunjalo, kunezikhathi eziningi kakhulu iziphethu zamanzi. Imvamisa zakheka eMedithera, ngaphansi kwesisekelo samafu e-cumuliform, ikakhulukazi ngemuva kokuphela kwehlobo. Zinezici eziningi ezifanayo neziphepho, kepha umehluko omkhulu ukuthi izindawo zamanzi zihlala olwandle, futhi isivinini somoya siphansi kakhulu (phakathi kuka-110 no-130km / h).
Noma kunjalo, indawo yaseSpain iye yabona neziphepho ezibhubhisayo, njengaleso esenzeka ngoMashi 1671 eCádiz. Kulinganiselwa ukuthi yayinobukhulu be-F4. Kuyiqiniso ukuthi sekuyisikhathi eside, kepha lokho akusho ukuthi ngeke kuphinde kwenzeke.
Ngingathanda ukubona ukwakhiwa kwesiphepho i-F5, kuthiwani ngawe? Okungenani okwamanje, kuzofanele sikhokhele i-F1, kanye namapayipi amanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ingabe kungaba neziphepho eSpain?